चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ
चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ २०१२ सालमा काभ्रे जिल्लाको धुलिखेल नगरपालिकाको चोच्छे टोलमा जन्मिएका हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । करीब २८ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका उनले २०६३ सालमा अवकाश पाएका हुन् । उनले आफ्नो सेवा अवधिभर कर र राजस्व प्रशासक, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन प्रमुखका साथै उद्योग, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयमा कार्य गरेका थिए । वन तथा भू-संरक्षण र गृह मन्त्रालय सचिवको जिम्मेवारीसमेत बहन गरेका श्रेष्ठले हेटौंडा सिमेण्ट कारखाना र नेपाल एसबीआई बैङ्कको अध्यक्षका रूपमा पनि काम गरेका थिए । विगत ४ वर्षदेखि एनसेल प्रालिमा एक्लो नेपाली सञ्चालक सदस्यका रूपमा संलग्न श्रेष्ठ जाइका अलुमनाई एशोसिएशन फोरम अफ सार्क कण्ट्रिजका पूर्वअध्यक्ष हुन् । करीब ६ वर्षउक्त संस्थामा कार्य गरेका उनी दुईकार्यकाल अध्यक्ष भएका थिए ।
सरल, सुलभ र सुपथ दूरसञ्चार सेवा
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सरकारी संस्थानबाट प्रारम्भ भएको हो । देशको कुनाकुनामा बसेका नागरिकमा सञ्चार सुविधा पहुँचको विस्तर भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारी एकाधिकारको अन्त्यपछि मात्र गति लिन थालेको भन्ने विषयमा दुईमत छैन । यद्यपि दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धमा सरकार र नियामक निकायले नै नीतिगत रुपमै स्पष्ट लक्ष्य र रणनीति तय गरेको देखिँदैन । यसको अलवा सेवाप्रदायकलाई राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने समान व्यवहार र सहजीकरणमा नियामक र जिम्मेवार निकायहरुको अभिभावकत्व र उदार सहभावको खाँचो पनि अनुभव गरिएको छ ।
नीतिगत विषयमा व्यक्तिगत लहड र व्यक्तित्वको प्रतिस्पर्धाका कारण लगानी नआउने वातावरणको सृजना हुनु हुँदैन । उदाहरणका लागि ‘वाइम्याक्स’ (विनातार इण्टरनेटलगायत सेवा प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि) प्रारम्भ गर्न स्वकृति दिने दुईनिकायका नीतिलाई प्रभाव पार्नसक्ने आशङ्कामा दुईव्याक्तिबीचको मतान्तरले हामी नेपालीले यो सेवा उपभोग गर्न ५ वर्षअनावश्यक रुपले खेर फाल्नुपरेको छ । यस्तै विदेशबाट नेपालमा गरिने टेलिफोन शुल्कको विषय हाल अनावश्यक रुपमा चर्चामा ल्याइएको छ । यस विषयमा २/३ ओटा आधारभूत तथ्यमा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । सञ्चारकै माध्यम भए पनि टेलिफोन र इण्टरनेट उस्तै हुन् भन्नु गलत हो । यिनीहरुको लगानी, रोयल्टी र कर पनि आकाश-जमीन फरक हुन्छ । टेलिफोन नेटवर्क स्थापना गर्न अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ र अनुमति लिन पनि अर्बौ राजस्व बुझाउनुपर्छ । जबकि इण्टरनेट सेवाका लागि लाख र करोडमा लाइसेन्स उपलब्ध हुन्छ । कर र राजस्व पनि लाखौंमा रहन्छ । यी दुवैको सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली पनि फरकफरक हुन्छ । इण्टरनेटमार्फत कम्प्युटरबाट कम्प्यूटरमा सञ्चार गरिने ‘डाटा सेवा’ दिन प्राप्त इजाजतलाई टेलिफोन नेटवर्कमार्फत ‘टेलिफोन सेटमा अन्त्य गर्नु’ गैरकानूनी हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कम्पूटरबाट टेलिफोनमा र टेलिफोनबाट कम्प्यूटरमार्फत प्रदान गरिने ‘स्वर सेवा’ सैद्धान्तिक विचलन एवम् गैरकानूनी गतिविधि हो । विनालगानी प्राप्त इण्टरनेटबाट अर्बौं लगानी गरेर स्थापित टेलिफोन नेटवर्कमा कल उत्थान र अन्त्य गर्ने दुस्साहस गर्नु अपराध हो । भ्वाइस ओभर इण्टरनेट प्रोटोकल भीओआईपी माध्ययमबाट कल चोरी भइरहेकोलाई कानूनी दायरामा ल्याउने हो कि ? भएको कानून नै खारेज गरी अब गैरकानूनी हुँदैन भन्ने सम्बन्धित निकायहरुले यसको उत्तर दिन ढिला भइसकेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विदेशबाट आउने कल सबै नेपालीले मात्र गर्ने होइन र सस्तो हुँदैमा आवश्यकभन्दा बढी कुरा गरिरहने पनि होइन । विदेशबाट आउने कलबाट नेपालले पाउने आम्दानीको झण्डै ५० प्रतिशत रकम सरकारी राजस्वमा जाने र यस्तो रकम अर्बौंमा रहेको तथ्य अर्को बिसन नहुने पक्ष हो । दूरसञ्चारको स्तरीय सेवा प्राप्त गर्न र अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन यथेष्ट लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्बना दूरसञ्चार सेवाबाट आर्जित पूँजी र दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, गुणस्तर वृद्धि र उन्नत प्रविधि ल्याउनतर्फ लगानी नगरी जलविद्युत्मा लगाएको र लगाउन दिएर यो क्षेत्रमाथि अन्याय गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना भएको संस्था दूरसञ्चार छोडेर लामो अवधिको निक्षेप, सरकारी ऋणपत्र मात्र होइन, जलविद्युत्तर्फ लागेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्र भने लगानीको अभावमा पछि परेको छ । राज्यले जुन उद्देश्यले संस्था स्थापना गरेको हो । त्यसमा लगानी अभाव हुँदाहुँदै अन्यत्र लगानी गर्न दिनु दीर्घकालीन सोचको खडेरी प्रतीत हुन्छ । उच्च प्रतिफल प्रापत हुने यस क्षेत्रमा आफै लगानी नगरी विदेशीका लागि किन छोडियो चिन्ताको विषय भएको छ । यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी र व्यवस्थापन भएको कम्पनीले शतप्रतिशतभन्दा बढी दरले आय वृद्धि गर्ने तर सरकारी संस्थाको जम्मा ३ प्रतिशतको वृद्धि हुनु अर्को सोचनीय विषय भएको छ । देशभर अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल विस्तार गरी ‘सूचना राजमार्ग’ निर्माण, देशको सबै भागमा मोबाइल सञ्चालन हुने गरी बीटीएस टावरको सञ्जाल र सञ्चारको अत्याधुनिक प्रविधि ल्याउने काममा लगानी गर्ने कार्य राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । तर, त्यसो हुन नसकी जलविद्युत्लाई मात्र अघि सारिउको छ । त्यस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार विकासको नाममा सङ्कलित अर्बौ रकम दूरसञ्चारको विकासका लागि लगानी नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा आएको विदेशी लगानीलाई पनि ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’द्वारा प्रत्याभूत कानूनी संरक्षण र सेवाबाट वञ्चित गरिएको अर्को तीतो सत्य छ । विदेशी लगानीअर्न्तगत आयको प्राविधिक सेवालाई पनि अब श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने नयाँ प्रचलन आएको छ । कसलाई कतिखेर के लहडको बल मिच्याइँले लगानी पलायन तत्काल नभए पनि नयाँ लगानी ‘दुरुत्साहन’ अवश्यंभावी छ ।
हाल चर्चामा रहेको ‘कौडीको मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी वितरण’ भन्ने पक्ष पनि विचारणीय पक्ष हो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई अर्बौ रुपैयाँ लिएर दिइने इजाजतपत्र प्रिmक्वेन्सीविना फोस्रो कागज मात्र हुन्छ । तर, बेलामौकामा आफ्नालाई, दातृसंस्था वा कुटनैतिक दबाबमा र सरकारी सेवाप्रदायकलाई कुनै मापदण्डविना सुर्ति माडेजस्तै गर्नु भएन । २ वर्षअघि विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कको दबाब भन्दै ग्रामीण दूरसञ्चारको नाममा भित्र्याइएका कम्पनीलाई अब दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैले मर्जर गर्नुपर्यो भन्न थाल्नु हचुवा नीतिको द्योतक होइन ? वाइम्याक्स प्रणाली ल्याउन सेवाप्रदायकले अनुरोध गरेको ५ वर्षपछि त्यो पनि सरकारी सेवाप्रदायकलाई मात्र दिनु । तेस्रो पुस्ता थ्रीजी भर्खर परीक्षणमा रहनुले, चौथो फोरजी ल्याउने दिन धेरै कुर्नुपर्ला जस्तो छ ।
समग्रमा सरकार र नियमन निकायले कुनै पक्ष वा शक्ति केन्द्रको दबाबमा पिपल पाते, लहडे नीति अवलम्बन गर्नु भएन । व्यक्तिको लहड र स्वेच्छाले होइन, समान व्यवहार, पारदर्शी र न्यायोचित नीतिबाट प्रत्यभूत सेवा र संरक्षणसहित अभिभावकको भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षाका साथ सबै नेपालीले सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा अत्याधुनिक र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पाउन सक्नुपर्छ ।